Amin'ny indostria samihafa, miovaova be ny dingan'ny famokarana emulsion. Ireo fahasamihafana ireo dia misy ireo singa ampiasaina (mifangaro, ao anatin'izany ny singa samihafa ao amin'ny vahaolana), ny fomba emulsification, ary ny fepetra fanodinana bebe kokoa. Ny emulsion dia fanaparitahana ranon-javatra tsy mety maty roa na maromaro. Ny ultrasound mahery vaika dia manome ny angovo ilaina amin'ny fanaparitahana dingana misy rano (dingana miparitaka) ao anaty vongan-drano kely amin'ny dingana faharoa (dingana mitohy).
Fitaovana emulsification ultrasonicdia dingana iray izay misy ranoka tsy mety maty roa (na mihoatra ny roa) mifangaro mifangaro mba hamorona rafitra fanaparitahana eo ambanin'ny asan'ny angovo ultrasonic. Ny tsiranoka iray dia zaraina mitovy ao anaty ranon-javatra hafa hamorona emulsion. Raha ampitahaina amin'ny teknolojia sy fitaovana amin'ny emulsification ankapobeny (toy ny propeller, mill colloid ary homogenizer, sns.), Ny emulsification ultrasonic dia manana ny toetran'ny kalitaon'ny emulsification avo lenta, ny vokatra emulsification miorina ary ny angovo ambany takiana.
Betsaka ny fampiharana indostrialy an'ny emulsification ultrasonic, ary ny emulsification ultrasonic dia iray amin'ireo teknolojia ampiasaina amin'ny fikarakarana sakafo. Ohatra, zava-pisotro mahery, ketchup, mayonnaise, jam, ronono artifisialy, sakafon-jaza, sôkôla, menaka salady, menaka, rano siramamy ary karazan-tsakafo mifangaro hafa ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo dia notsapaina ary nalaina an-trano sy tany ivelany, ary nahatratra ny vokatry ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny fahombiazan'ny famokarana, ary ny emulsification carotene malaky rano dia voasedra tsara ary nampiasaina tamin'ny famokarana.
Ny vovo-hoditr'akondro dia nosoloin'ny fanaparitahana ultrasonic niaraka tamin'ny fandrahoana tosidra ambony, ary avy eo namboarina amolyzy. Ny fanandramana singa tokana dia nampiasaina handinihana ny vokatr'io pretreatment io amin'ny tahan'ny fitrandrahana ny fibres sakafo mahavelona avy amin'ny hoditr'akondro sy ny fananana fizikokimia an'ny fibres sakafo tsy mety levona avy amin'ny hoditr'akondro. Ny valiny dia nampiseho fa ny fahafaha-mitazona rano sy ny herin'ny rano mamatotra ny fanaparitahana ultrasonic miaraka amin'ny fitsaboana mahandro amin'ny tosidra ambony dia nitombo 5,05g / g sy 4,66g / g, avy eo 60 g / g ary 0. 4 ml / g.
Manantena aho fa ny etsy ambony dia afaka manampy anao hampiasa tsara kokoa ny vokatra.